मेयर कप क्रिकेटको उपाधि एपीएफलाई — Sanchar Kendra
ललितपुर । पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर कप महिला टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले लिएको छ ।
कीर्तिपुर मैदानमा भएको फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आठ विकेटले हराउँदै एपीएफले उपाधि जितेको हो । सुदूरपश्चिमले दिएको एक सय सात रनको सामान्य लक्ष्य एपीएफले १६ ओभर दुई बलमा मात्रै दुई विकेट गुमाएर भेटायो ।
एपीएफको जितमा ज्योती पाण्डेले सर्वाधिक ३६ रन बनाइन् भने सीता रानामगरले २७ रनमा आउट भइन् । इन्दू बर्मा १९ र ममता चौधरी १५ रनमा नटआउट रहे ।
यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले विन्दू रावतको नटआउट ४४ रन मद्दतमा सात विकेट गुमाएर एक सय ६ रन बनाएको थियो । प्रतियोगिताको विजेता एपीएफले ३ लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । यस्तै उपविजेता सुदूरपश्चिमले १ लाख ५० हजार पाएको छ ।
निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने १९ सय सवारी प्रहरी नियन्त्रणमा
एकैदिन ४५२४ कोरोना संक्रमित थपिए, १८ जनाको मृत्यु
१५ दिनको निषेधाज्ञा घोषणापछि उपत्यका छोड्नेहरुको भिड, पछिल्लो २४ घण्टामा कतिले छोडे काठमाडौँ ?
बिहिबारदेखि काठमाडाैं उपत्यकामा के खुल्छ, के बन्द हुन्छ ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा